यी हुन् ट्रेन्डिङका ५ जिन्स प्यान्ट :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
'दिदी/दाइ प्यान्ट देखाउनुस् न..' प्यान्ट किन्दै हुनुहुन्छ भने कपडा पसल पुगेर जो-कोहीले सबभन्दा पहिले भन्ने यही हो।
शब्द भुइँमा नझर्दै उताबाट प्रश्न तेर्सिन्छ, 'ग्रन्च देखाऊँ कि प्लेन? चुजमा कि स्ट्रेट?'
सामान्य पसलमा होस् या ठूला स्टोरमा, बजारमा जे चल्तीमा हुन्छ, व्यवसायीहरू त्यही अनुसारका प्यान्ट ग्राहकलाई देखाउन अघि सर्छन्- प्लेन (सादा), ग्रन्च (कपडा निकालेर बनाइएको), स्किनी-चुज (कम्मरदेखि खुट्टासम्म छालामा टाँसिने)। त्यो पनि जिन्स धेरै चल्तीमा छ।
धेरैको रोजाइमा यस्तै प्यान्ट परेर होला, व्यवसायीहरू यिनै डिजाइनको उदाहरणसँगै हामीलाई आफ्नो पसलमा स्वागत गर्छन्। हामी मन परे किन्छौ, नभए अन्त पसल चहार्छौं। बजार ठूलो हुनुको यही त छ फाइदा!
नेपाली बजारमा जिन्स प्यान्ट कहिले भित्रियो, व्यवसायीहरूलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। हिप्पीहरूको आगमनसँगै, ६०-६५ वर्षअघि देखिन थालेको अड्कल उनीहरू लगाउँछन्।
असनस्थित कपडा पसल सञ्चालक स्मृति तुलाधरले भने ४० वर्षअघि जिन्सको व्यापकता भएको बताइन्।
'पहिल्यैदेखि जिन्स प्यान्ट निकै व्यापार हुन्थ्यो। जिन्स नबिकेको कुनै वर्ष छैन,' हजुरबुवाबाट हस्तान्तरण भएको कपडा पसल झन्डै २५ वर्षदेखि सम्हाल्दै आएकी स्मृतिले भनिन्।
उनका अनुसार जिन्सको फेसन दशक-दशकमा दोहोरिँदो छ। अहिले नेपाली बजारमा महिलाका लागि चलेको प्यान्ट पनि पूर्ण हिसाबले नयाँ डिजाइनका होइनन्। पहिले पनि यी डिजाइनका प्यान्ट बजार भित्रिसकेका थिए।
बजारमा महिलाका लागि जिन्स प्यान्ट सामान्यतया एक हजारदेखि तीन हजार रूपैयाँमा पाइन्छन्। कुनै निश्चित ब्रान्ड छान्नुभयो वा पसलअनुसार भाउ फरक पर्छ नै।
दसैं नजिकिएको छ। यो बेला नयाँ डिजाइन बजारमा देखिन्छन्। यसपालि कोरोनाका कारण फेसनमा असर पक्कै परेको छ। तै पनि यति बेला बजारमा पाँच डिजाइनका प्यान्ट चल्तीमा रहेको स्मृति बताउँछिन्।
यी प्यान्ट कस्ता हुन्, हामी पनि बुझौं न त।
१. स्किनी/ चुज जिन्सः
नेपाली बजारमा स्किनी जिन्सको ट्रेन्ड कहिल्यै हराएन भन्दा हुन्छ। बीचमा एकाध वर्ष हराए पनि यो बारम्बार दोहोरिएको डिजाइन हो।
व्यवसायीहरू पनि स्किनी जिन्सको माग पहिल्यैदेखि धेरै भएको बताउँछन्। स्किनी जिन्स पनि दुई खाले हुन्छ- 'ग्रन्च' र 'प्लेन'। प्लेन पहिलेदेखि चलिआएको हो भने ग्रन्च नयाँ।
स्मृतिका अनुसार बिक्री हुनेमध्ये जम्मा ३० प्रतिशत प्यान्ट ग्रन्च हुन्छन्।
'पहिलेको तुलनामा ग्रन्च बढी भएको खोज्ने ग्राहक हुनुहन्छ। ग्रन्च प्यान्ट बढी किशोरीको रोजाइमा धेरै पर्छ,' स्मृतिले दुई दशकभन्दा बढीको व्यापार अनुभवमा भनिन्।
यसमा फेरि अचेल 'हाइ-वेस्ट' र 'लो-वेस्ट' आउँछ। हाइ-वेस्ट नाइटोमाथि लगाइन्छ भने लो-वेस्ट नाइटोभन्दा मुनि। हाइवेस्ट प्रायः मोटो पेट भएकाको रोजाइमा पर्दै आएको देखिन्छ।
२. ब्वाइफ्रेन्ड/ मम्स जिन्सः
केही वर्षयता बजारमा ब्वाइफ्रेन्ड र मम्स जिन्स ट्रेन्डमा छ। प्यान्टको नाम नै ब्वाइफ्रेन्ड र मम्स जिन्स कसरी रहन पुग्यो भन्ने लाग्न सक्छ?
यसबारे हामीले फेसन डिजाइनर-स्टाइलिस्ट रेनु श्रेष्ठसँग बुझ्यौं।
उनका अनुसार केही किशोरीहरूले आफ्ना ब्वाइफ्रेन्ड-प्रेमीका प्यान्ट लगाउन थाले। हेर्दा ट्रेन्डी र खुला भएकाले लगाउँदा पनि सजिलो माने। त्यसपछि किशोरीहरूकै लागि भनेर कम्मर घटाएर, लम्बाइ छोट्याएर, अलि खुला ब्वाइफ्रेन्ड जिन्स बजार भित्रियो।
त्यस्तै गरी घरमा काम गर्ने महिला र आमा उमेरका लागि सजिलो र खुला प्यान्ट डिजाइन गरियो। यसको नाम 'मम्स जिन्स' रहन पुग्यो।
मम्स जिन्स र ब्वाइफ्रेन्ड जिन्समा के फरक छ त?
ब्वाइफ्रेन्ड जिन्स, मम्स जिन्सको तुलनामा बढी खुकुलो र लामो हुन्छ। ब्वाइफ्रेन्ड जिन्स लगाउँदा खुट्टाको तलबाट पट्याइन्छ। मम्स जिन्स हाम्रो कुर्कुचासम्मको लम्बाइमा हुन्छ। यो नपट्याइ लगाइन्छ र ब्वाइफ्रेन्ड जिन्सको तुलनामा हाइवेस्ट हुन्छ।
स्किनी जिन्सको तुलनामा खुकुलो र सहज भएका कारण धेरैको रोजाइमा यी प्यान्ट परेको फेसन डिजाइनर-स्टाइलिस्ट रेनुको भनाइ छ। उनका अनुसार बजारमा यी जिन्स चल्नुमा अर्को पनि कारण छ।
'धेरै युवारुले सन् १९८० को गीत, म्युजिक भिडिओ हेर्न थाल्नुभयो क्यार। यी प्यान्ट त्यतिबेलाका डिजाइन हुन्,' उनी भन्छिन्, 'त्यो बेलाको गीत-संगीत मधुर र शान्तिमय खालका थिए। हामी यो अस्तव्यस्त समयमा त्यस्तै गीत खोज्दै ८० दशकमा पुग्यौं। अनि त्यहीबाट यो फेसन ट्रेन्ड पनि फर्कियो भन्न सकिन्छ।'
यी खालका प्यान्ट ग्रन्च र प्लेन दुवैमा पाइन्छ।
३. बक्स प्यान्टः
फेसन डिजाइनर रेनुका अनुसार बक्स प्यान्ट पनि सन् १९८० ताकाकै ट्रेन्डिङ प्यान्ट हो। तर यो सन् २०१८/१९ देखि पुनः बजारमा देखिन थाल्यो।
अमेरिकी मोडल काइली जेनरले यो प्यान्ट लगाएको देखेपछि किशोरीहरू पनि आकर्षित भए। अरू प्यान्टको तुलनामा यसमा बढी खल्ती हुन्छन्। त्यस्तै यो खुला र तल्लो भागमा इलास्टिक रहेका कारण खुट्टामा टपक्क बस्छ।
हेर्दा राम्रो देखिनुका साथै सजिलो हुने भएर बक्स प्यान्ट पनि अहिले बजारमा राम्रै व्यापार हुने व्यवसायी स्मृति बताउँछिन्। प्रायः जिन्स बक्स प्यान्टको कपडामा भने कटन मिसिएको हुन्छ।
४.बेली/बेल बटम जिन्सः
आजभन्दा १०-१५ वर्षअघि बजारमा छाएको बेली/बेल बटम जिन्स केही महिनायता बजारमा फेरि चलेको छ। कुनै समय बुटकट भनेर पनि चिनिएको प्यान्ट हो यो।
तर बुटकटको तुलनामा यो प्यान्टको तल्लो भाग कम फराकिलो हुन्छ। कम्मरदेखि घुँडासम्म टपक्क हुने र त्यो भन्दा तल कपडा फैलिँदै जाने डिजाइनलाई नै बेली डिजाइन भनिन्छ।
डिजाइनर रेनुका अनुसार बेली जिन्स बुटकटबाटै प्रभावित हो। नेपाली बजारमा यो प्यान्ट सन् २०१९ को मध्यबाट फेरि देखियो। अहिले ट्रेन्डमा छ।
५. स्ट्रेट जिन्सः
कम्मरदेखि खुट्टासम्म एउटै धर्काको सिलाइ भएको स्ट्रेट जिन्सले हालसालै बजार लिइरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यो प्यान्ट टपक्क कसेको भए पनि घुँडामा केही खुकुलो हुन्छ जस कारण हामीलाई बस्दा, हिँड्दा सहज हुन्छ।
पहिले लो-वेस्टमा आएको भए पनि अहिले हाइ-वेस्टमा चलेको यो प्यान्ट अग्लो, होचो वा जुनकुनै शरीर आकार भएकालाई सुहाउँछ। टिसर्ट र सर्टसँग मात्र नभइ स्ट्रेट प्यान्ट कुर्ती र टप्स लगाउनेको रोजाइमा पनि परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
अहिले बजार नियाल्ने हो भने एकदमै नयाँ डिजाइनका प्यान्टभन्दा पनि पुरानै फेसन फर्किएको रेनु बताउँछिन्।
'अहिले १९८० ताकाका प्यान्ट नै चल्तीमा छन्। यो समय भनेको विभिन्न विधाका गीत-संगीत भित्रिएको समय हो। त्यो बेला थुप्रै म्युजिक भिडिओ र फिल्म सार्वजनिक भए। त्यही समयको कलालाई फर्केर हेर्दा मानिसहरूले त्यसबेलाको फेसन, ट्रेन्ड पनि पुनः ब्युँताएका हुनसक्छन्,' उनी भन्छिन्।
उनले थपिन्, 'त्यो मात्र होइन, हाम्रो रङ रोजाइमा पनि परिवर्तन आएको छ। धेरैको रोजाइमा अहिले हल्का र उज्याला कपडा पर्न थालेको छ।'
बजारमा माथिका पाँचबाहेक जगर्स जिन्स र रक्की (माथिसम्म फित्ता भएको) जिन्स पनि राम्रो चलेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
फेसन डिजाइनर तरुनिका महतोका अनुसार जिन्सको ट्रेन्ड अक्टोबरदेखि अप्रिल महिनामा बढी देखिन्छ। अनि जिन्स प्रायः सबै उमेरका ग्राहकको रोजाइमा पर्छ।
'जाडो महिना लागेसँगै नयाँ डिजाइनमा जिन्स बजार भित्रिन थाल्छ। किनभने ऊनको लुगाको तुलनामा जिन्सले बिझाउँदैन र लगाउँदा पनि सहज हुन्छ। जाडोमा चल्ने जिन्समा कटन मिसिएको हुन्छ,' उनले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २५, २०७७, ०१:२६:००
घट्यो सुन-चाँदीको मूल्य
कति पुग्यो सुन-चाँदीको मूल्य?
प्रतितोला पाँच सयले बढ्यो सुन
बढ्यो सुन-चाँदीको मूल्य